Mogadishu Journal » Afhayeenka Wasaaradda Amniga oo eedeeyay dowladda Soomaaliya
The math shows Canada needs to admit more immigrants, Conference Board says
Afhayeenka Wasaaradda Amniga oo eedeeyay dowladda Soomaaliya
Mjournal :-Afhayeenka Wasaaradda Amniga dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in aysan suurgal aheyn in uu Qarax ka dhaco Magaalada Muqdisho xilli inta badan la xiray Wadooyinka Muqdisho.
Cabdcasiis Xildhibaan ayaa sheegay in ay jiraan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ,kuwaasoo aan ka shaqeynin danaha umadda Soomaaliyeed.
Afhayeenka ayaa sheegay in aysan dhici karin in dowladda Soomaaliya ay dadka Shacabka ah u sheegto warar aan macquul aheyn oo ah in qaraxii shalay la baari doono Ama lala xisaabtami doono cidii ka dambeysay.
Cabdicasiis Xildhibaan waxaa uu sheegay in aysan jirin isla xisaabtan ku aadan Mas’uuliyadda Madaxda Qaranka ee qaabilsan Ammaanka.
Afhayeenka ayaa muuqda in uu dhaliilay dowladda uu ka tirsan yahay, waxaana uu sheegay in uu dhibsaday wax aan jirin in uu dadka u sheego maalinwalba.
70 sano jir caawa lagu toogtay Muqdisho
Kenya oo ka hadashay go’aankii lagu soo celiyay mas’uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya by Ahmed Cali - Tue May 21st 16:50:51
Ilhaan Cumar oo taageertay isu galmooda dadka isku jinsiga ah by Ahmed Cali - Tue May 21st 13:40:13
Opportunities for Peace in Kismayo, Somalia by Ahmed Cali - Tue May 21st 11:22:28
Nairobi: Ciidamada oo galay xawaaladaha Soomaalida by Ahmed Cali - Tue May 21st 11:18:10
Mamulka Jubbaland oo Ka hadlay darbiga ay Kenya ka dhiseyso xadka Soomaliya by Ahmed Cali - Tue May 21st 11:03:38